पोखराका ३६ वर्षीय सविन अधिकारी अमेरिकामा आँसु पिएर बाँचिरहेका छन् । ‘सपनाको देश’ पुगेका अधिकारीसँग पीडा र पश्चाताप मात्र छ । अधिकारीले नेपालदेखि अमेरिकासम्मको यात्रामा खेपेका सास्ती सुन्दा आङ जिरिङ्ग हुन्छ । आँखा रसाउँछ । शरीरमा काँडा उम्रिन्छ । लाग्छ, ‘मान्छेले जीवनमा यति धेरै पीडा कसरी खप्न सक्छ ?’
म्याग्दीमा जन्मिए । पोखरामा हुर्किए । बाल्यकाल सुख र खुसीमा बित्यो । भारतीय सेनामा कार्यरत बाआमाले उनको हरचाहना पूरा गरिदिए । बाआमाका एक्लो छोरा अधिकारीलाई कुनै कुराको कमी थिएन । बच्चैदेखि उनको गोजीमा पैसा टुट्दैनथ्यो । उनको सुख र खुसी देखेर बालसखी डाह गर्थे ।
बाआमाको अत्यधिक मायाका कारण पुलपुलिएका अधिकारीको पढाइ भने राम्रो थिएन । माध्यमिक तहको अध्ययनकै क्रममा उनी पोखराका डान्स र डिस्को चहार्ने भइसकेका थिए । परिणामतः २०५८ सालमा प्रवेशिका परीक्षामा उनी अनुत्तीर्ण भए, चारवटा विषय लाग्यो । त्यसपछि निराश भएका अधिकारी भारत गए ।
एक वर्षे भारत बसाइका क्रममा उनी कुलतमा फसे । मद्यपान र धूमपानको पारखी भए । बाले भारतीय सेनाबाट अवकाश पाएपछि उनी पनि पोखरा फर्किए । उनको दैनिकीमा परिवर्तन भएन । दिन प्रतिदिन लागूऔषधमा चुर्लुम्म डुब्दै गए ।
बाआमालाई पीडा भयो । विगतमा कहिल्यै ठूलो स्वर नगरेका बाआमाले उनलाई गाली गर्न थाले । घरबाहिर निस्कँदा र पैसा माग्दा कारण सोध्न थाले । दिदीबहिनी र छिमेकीले गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन भयो । क्रमशः उनी एक्लो भए, अधिकारीमा निराशा बढ्यो ।
अधिकारी काठमाडौं आए । खिचापोखरीस्थित एउटा फेन्सी पसलमा काम गर्न थाले । करिब दुई वर्ष साथीसँग पसलमा बिताएका उनले पहिलोचोटि जीवनमा अभावको अनुभूति गरे । पैसाबिनाको जीवन अपुरो लाग्यो, उनलाई ।
अमेरिका जाने सोच
अधिकारीको एक त्यस्तो व्यक्तिसँग भेट भयो, जसले ‘नेपालमा केही हुँदैन, अमेरिका जानुपर्छ’ भनेर दिमाग भुटिदिए । उनले पत्याए ।
अधिकारीमा अमेरिका जाने सपना झांगियो ।
अमेरिका गएर प्रशस्त पैसा कमाउने र सुखसँग जीवन बिताउने सपना पूरा हुने आसमा उनी उत्साहित भए । अमेरिका पुर्यादिन्छु भन्नेले सहज बाटो पनि देखाइदियो । उडेर भन्दा पनि गुडेर र हिँडेर सस्तोमा सजिलै अमेरिका पुग्ने बाटो । जसका लागि १२ लाख रुपैयाँ लाग्ने बताइयो ।
अधिकारीले घरपरिवारसँग अनुरोध गरे । १२ लाख रुपैयाँ ल्याए र बुझाए । अनि, बाटो खर्च ३ लाख बोकेर उनी अमेरिका जान तयार भए ।
भारत, रुस हुँदै मेक्सिकोसम्म
पैसा बुझाएको एक महिनामा उनी नयाँ दिल्लीका लागि उडे । नयाँ दिल्लीमा अमेरिका हिँडेका चार नेपाली र पाँचजना बंगली नागरिक भेटे । नयाँ दिल्लीबाट दुबई पुगे । उनीहरुलाई दुबईबाट रुस पुर्याइयो । रुसबाट इटाली पुगेपछि उनलाई युरोपका विभिन्न देशमा घुमाइरहे ।
एकातिर भाषाको समस्या । न भोक लाग्दा खान पाए, न त तिर्खा लाग्दा पानी पाए । मायादया गर्ने कोही भएनन् । ‘अमेरिका पुर्याउँछौं’ भनेर त्यहाँसम्म लैजानेहरुले पनि वास्ता गर्न छाडे ।
हरेक नयाँ देशमा पुग्न लाग्दा पुराना दलालले नयाँलाई जिम्मा लगाउँथे । पुरानाले नयाँलाई जिम्मा लगाएपछि देश परिवर्तन भएको थाहा हुन्थ्यो । इटालीबाट इक्वेडर हुँदै कोलम्बिया छिरेपछि दलाल समूहले थप पाँच हजार डलर माग्यो । पैसा नदिए त्यहीँ छाड्ने धम्की दियो ।
अन्ततः उनले घरमा फोन गरेर रुँदै पैसा मागे । बाआमाको मन पग्लियो । पैसा पठाए । दलाललाई तिरे । अनि, फेरि सुरु भयो यात्रा ।
कोलम्बिया र पनामाको सिमानामा पर्ने जंगल अत्यन्तै डरलाग्दो थियो । जहाँ विषालु सर्पले टोकेर उनीसँगै आएका एक बंगाली नागरिकको मृत्यु भयो । उक्त जंगलमा सन् १९६४ देखि नै सरकारसँग लडिरहेका कोलम्बियाका हतियारधारी गुरिल्ला समूह बस्ने रहेछन् । गुरिल्लासँग भेट त भएन । तर, जंगलको यात्रा कम्ती सास्तीपूर्ण थिएन ।
पनामा छिचोलेर कोस्टारिका पुग्दा नयाँ जीवन पाएको अनुभव गरे । त्यहाँ पुगेर डेढ महिनापछि नुहाउन पाए । जंगलमा हिँड्दा काँडाले कोतरेको घाउमा औषधि लगाए ।
फेरि साथमा बोकेको पैसा सकियो । गाँसबासकै समस्या भयो । फेरि रुँदैरुँदै घरमा फोन गरेर पैसा मागे । फेरि बाआमाले पाँच हजार डलर पठाइदिए । त्यसमा पनि दलालले पाँच सय डलर खाइदियो ।
दलालले पटक–पटक पैसा माग्न थाल्यो । पैसा नदिए ज्यान मार्ने धम्की दिन थाल्यो । सस्तोमा सजिलै अमेरिका पुग्न हिँडेका अधिकारीले यात्रा अवधिभर दलाललाई ४० लाख रुपैयाँ तिरे । बाआमाले पोखराको घर बैंकमा धितो राखेर ऋणा लिए र पैसा पठाए । यात्रामा भोग्नुपरेको सास्ती त अवर्णनीय छ ।
सँगै हिँडेका एक साथीको बाटैमा मृत्यु भयो । जंगलमा पानी नपाएर छटपटाए । भोकले रन्थनिए । जंगलमा जे पाइन्छ, त्यहीँ खाए । मेक्सिकोको जंगलमा भोग्नुपरेको दुःख सम्झँदा अहिले पनि भक्कानिन्छन्, अधिकारी ।
जंगलमा घिस्रिएर हिँडे । हिलोमा दौडिए । कन्टेनरभित्र निस्सासिएर यात्रा गरे । सुरुङमा रात बिताए । करिब २० दिन मेक्सिकाको जंगलमा भोक, प्यास र रातदिन नभनी हिँडेपछि अधिकारी तिख्वाना नदी पार गर्दै अमेरिका छिर्यो ।
अमेरिका पुगेपछि पनि उस्तै सास्ती
नेपालबाट हिँडेको चार महिनापछि अमेरिका छिरेका अधिकारीले शरणार्थी शिविरमा रात बिताए । शिविरमा ९ हजार डलर तिरेर बाहिर निस्किए । न्युयोर्क गए । अहिले त्यतै छन् । अमेरिकामा उनी दुःखी छन् । जुन सपना साँचेर उनी नारकीय बाटो हुँदै अमेरिका गए, त्यहाँ त्यति सजिलो थिएन, छैन ।
न पैसा कमाउन सके न खुसी हुन । अहिले पनि अमेरिकामा संघर्ष गरिरहेका छन्, अधिकारी । भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । पीडा सुनिदिने कोही छैनन् । बाआमाले घर धितो राखेको लिएको ऋण चुक्ता गर्न सकेका छैनन् ।
बा बिरामी भएर अस्पतालमा छटपटाउँदा पनि उनी अवाक् छन् । केही गर्न सक्दैनन् । कहिले बिहे गर्ने ? टुंगो छैन ।
उनी अहिले पनि अमेरिकामा अवैध रूपमा बसिरहेका छन् । गएदेखि कानूनी लडाइँ लडिरहेका छन् । वकिललाई पैसा दिइरहेका छन् । वैध नागरिक हुने टुंगो छैन । उनी अहिले जीवनप्रति निराश र असन्तुष्ट छन् । एक्लोपनले गाँजेको छ । अमेरिका पुग्ने बाटो रोजेप्रति पश्चाताप गरिरहेका छन् । र, उनी कसैलाई पनि ‘अन्डर वे’हुँदै अमेरिका नआउन सुझाव दिन्छन् ।
(पीडितको अनुरोधमा नाम परिवर्तन गरिएको छ ।)
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १८, २०७६, ०५:४१:००
विराट–अनुष्काकाे सन्तानको पर्खाइमा छिन् यी महिला !
वर्षाले महोत्सव प्रभावित